विराटनगर : बैंककमा उपचार गराउन पुगेका प्रदेश नं. १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको छ । घाँटीसम्बन्धी समस्या पत्ता नलागेपछि उनी उपचारका लागि गत शुक्रबार थाइल्याण्डको राजधानी बैंकक गएका थिए । मुख्यमन्त्री राईको बैंककस्थित बुम्रुनग्राड इन्टरनेशनल हस्पिटलमा भएको स्वास्थ्य जाँचअनुसार अवस्था सामान्य रहेको उनको सचिवालयले जानकारी दिएको छ । घाँटीको समस्याबाट पीडित
केन्द्रीय सरकारको नजर प्रदेश २ मा : प्रचण्ड
महोत्तरी : नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रदेश २ को लागि राम्रो दिन आएको बताएका छन्। विकासको दृष्टिले पछि परेको प्रदेश २ लाई समृद्ध बनाउन केन्द्रीय सरकारले योजना ल्याएको उनले बनाए। महोत्तरीको गौशालामा दसैं, दिपावली, छठको अवसरमा आयोजित शुभकामना कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्न हेलिकपटर चढेर आएका प्रचण्डले भने, ‘दुई बाम पार्टीको एकतादेखि नै हाम्रो नजर प्रदेश २
काठमाडौँ : सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेताबीच आरोप प्रत्यारो चलिरहेका बेला अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई सिंगापुरबाट टेलिफोन गरेका छन् । संसदको बर्खे अधिवेशनको अन्तिम दिन वरिष्ठ नेता नेपालले सरकारले जनअपेक्षा अनुरुप काम गर्न नसकेको भन्दै कडा मन्तव्य दिएपछि नेकपामा खटपट देखिएको थियो । प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली न्यूयोर्कस्थित
प्रधानमन्त्री ओलीले संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभामा बिहीबार सम्बोधन गर्ने
काठमाडौं : प्रधानमन्त्री एवम् नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली शनिबार साँझ अमेरिका उडेका छन्। ओली राष्ट्रसंघीय महासभामा भाग लिन अमेरिका उडेका हुन्। संयुक्त राष्ट्रसंघको ७३औं महासभामा सहभागी भएपछि उनी त्यहाँबाट मध्य अमेरिकी मुलुक कोष्टारिक जाने छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभा मंगलबारबाट सुरु भए पनि उच्चस्तरीय छलफल भने मंगलबारबाट हुँदै छ। प्रधानमन्त्री ओलीले महासभामा बिहीबार
नेपालको आकार ३१० वर्गकिमि खुम्च्याइयो काठमाडौं : कालापानी क्षेत्र गायव पारिएको नक्कली नक्सा सरकारले प्रयोग गर्दै आएको नापी विभागले देखाएको छ । तर, विभागकै आधिकारिक नक्सामा वर्षौंदेखि लिम्पियाधुरा छुटिरहेको पाइएको छ । यसले नेपालको आकारलाई करिब ३ सय १० वर्ग किलोमिटर खुम्च्याएको छ । भारतले नै बनाएका पुराना नक्सामा पनि लिम्पियाधुरा नेपाली भूमि रहेको प्रस्ट देखिन्छ
काठमाडौं : नेकपाले मन्त्रीहरूमाथि निगरानी सुरु गरेको छ । सरकार र मन्त्रीहरूका काम कारवाहीमाथि प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले निगरानी सुरु गरेका हुन् । सरकारका काम कारवाहीप्रति जनतामा देखिएको निराशा र मन्त्रीहरूका प्रस्तुतीमा दुई अध्यक्ष (ओली-दाहाल) गम्भीर समीक्षामा जुटेका छन् । आवश्यक पर्दा नेकपाका पूर्वघटकको सुविधा नछाडी जुनसुकै मन्त्रीलाई पनि
सय रुपैयाँमा पढाउने सञ्जेलको तीन सय रुपैयाँमा बिहे !
सञ्जेलको सन्देश : देखासिकी नगरौँ, दाइजो नै छोरी हुन् काठमाडौँ : राजधानीको गुहेश्वरी मन्दिरमा सोमबार बिहान एउटा सानो चहलपहल थियो । रातो कुर्ता सुरुवाल लगाएकी एउटी युवती लजाउँदै यताउता गरिरहेकी थिइन् । अर्कातिर तिलचामले कपाल भएका हँसिला पुरुष पनि त्यहाँ सरसामान जुटाउन जुटिरहेका थिए । र, उनीहरुका साथमा थिए, करिब १० जनाको संख्यामा देशका सेलिब्रेटी, कलार